ပိုမိုကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ထားပြီး အသိဉာဏ်မြင့်သော မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ခြင်း
Myanmar CSR report (950MB)
ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စေရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် မျှဝေခွဲသုံးမှုကို ပေါင်းကူးခြင်း
တစ်ခါတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တစ်ဦးက ကျွန်တော့်ကို မေးခဲ့ဖူးတယ် “Facebook အပြင် အင်တာနက်မှာ ဘာဝန်ဆောင်မှုတွေကို ပေးနေသလဲ?” ကျွန်တော်ပြန်ဖြေခဲ့တယ် "လက်ညှိုးထိုးမလွဲတဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေပေါ့" လို့။
ယခုခေတ်ဟာ အင်တာနက်ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ညှိုးထိုးမလွှဲတဲ့ချိန်ဆက်မှုအထောက်အပံ့ဖြင့်ဆိုလျှင် သင်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ ယာဉ်ကိုခေါ်ဆိုရုံဖြင့် ခရီးတစ်ခုထွက်နိုင်ပါတယ်။ သင်အိမ်မှာနေပြီးတော့ နောက်ဆုံးထွက်ဒီဇိုင်းတီရှပ်ကို အိမ်တိုင်ယာရောက်ပို့ခိုင်းလို့ရပါပြီ။ ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ငွေသားနဲ့ပေးချေစရာမလိုဘဲဝယ်ယူမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာ အားပေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ဦးလိုပဲ ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့ VR မျက်မှန်တွေကိုတပ်ဆင်နိုင်ပါပြီ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ထိပ်သီးအခွင့်ထူးခံလူတန်းစားများနှင့်အတူ တိုက်ရိုက်သင်ကြာမှုပေးသည့် အတန်းတွေတက်နိုင်ပါပြီ။ မျက်နှာစိမ်းတစ်ဦးထံမှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုတောင်းခံဖို့ သင့်ကိုယ်ပိုင်ပင်ကိုအရည်အချင်းကို ကျားကုပ်ယူနိုင်သလို အခြားသူများ၏ကြမ္မာကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အကျယ်ချဲ့ရန် Zhang Liman Huawei Technologies (Yangon) Co. Ltd. ၏ CEO
နိုင်ငံတကာတွင် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (ICT) ဆိုင်ရာ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဦးစီးဆောင်ရွက်နေသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် Huawei သည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် 2003 ခုနှစ်ကတည်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်အခြေချ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ICT ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို MPT၊ Telenor ၊ Ooredoo နှင့် MEC ကဲ့သို့သော ဒေသခံဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများမှ အသုံးပြုလျှက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ၏ တစ်ဝက်ကျော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆယ်သွယ်ရေး ကွန်ရက်များ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေပြီ ဟုဆိုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ချိတ်ဆက်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်သော မြန်မာနိုင်ငံကို တည်ဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်
ကမ္ဘာကြီးဖြစ်တည်ပုံမှာ အခြေအနေပေးမှုများအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် ရှေးမူမပျက် ကောင်းမွန်သော စိတ်ဝိဥာဏ်အားတွင်ရှိပါသည်။
ရပ်နားမှုနှင့်ချီတုံချတုံဖြစ်မှုများက အနီးဆုံးအကွာအဝေးတစ်ခုကိုတောင်မှ အရောက်လှမ်းနိုင်မည်မဟုတ်၍ ပုံမှန်ခြေလှမ်းအဆင့်များသည် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့်ခရီးလမ်းရှည်ကြီးကို အောင်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများပင်ဖြစ်ပါသည်။
သေးငယ်သည့်အစပျိုးမှုများမှသည် ကြီးမြတ်သည့်အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရယူနိုင်ခြင်းမှာ အစွန်းဆုံးအောင်မြင်မှုကိုရှေးရှုသည့် အပြောင်းအလဲကိုသတ်မှတ်ပေးနိုင်သော ခိုင်မာကျစ်လစ်သည့် အခြေခံအုတ်မြစ်မှသာလျှင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်-ဆက်သွယ်ထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရှေးမူမပျက်သောပုံစံ
ကမ္ဘာကြီးနှင့်သင့်ကိုချိတ်ဆက်ပေးသလိုခံစားရသည့် အခိုက်အတန့်များကို သင်မှတ်မိပါသေးသလား?
နိုင်ငံရပ်ခြားကို သင့်မိသားစုနှင့်အတူ ခရီးထွက်တုန်းက သင်မျှဝေထားသည့် အလန်းစားပုံတွေကိုရောမှတ်မိပါသလား? နှစ်ပေါင်းများစွာအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ဦးကသင့်ကို လှမ်းနှုတ်ဆက်တဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရောမှတ်မိပါသလား? အချိန်နေရာမရွေး ကွန်ယက်သုံးစွဲ့မှုဖြင့်နှလုံးသားများဟာ စိုးရိမ်မှုနှင့်မေတ္တာတရားတို့ဖြင့်ဒွန်တွဲချိတ်ဆက်ထားပါသည်။
ဤသည်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်-ဆက်သွယ်ထားသည့် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတွက် မိမိတို့ရဲ့ ခံယူထားသည့်တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
Huawei ရဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီး
Huawei ရဲ့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ရည်မှန်းချက်အသစ်ကတော့ အပြည့်အဝချိတ်ဆက်ပြီး အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက် လူတိုင်း၊ အိမ်တိုင်း၊ အဖွဲအစည်းတိုင်းဆီသို့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကို ယူဆောင်လာပေးဖို့” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ ကြုံတွေရမယ့် အပြည့်အဝချိတ်ဆက်ပြီး အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်
ဦးဆောင်နေသော အိုင်စီတီနည်းပညာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ နည်းပညာအသစ်တွေက enterprise လုပ်ငန်းတွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါတယ်. ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာနဲ့ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ပေါ့ပါးမြန်ဆန်ပြီး အကျိုးများတဲ့ အဆင့်မြင့် သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေလိုအပ်ပါတယ်။
Huawei Myanmar CSR အစီရင်ခံစာ
Huawei Myanmar CSR အစီရင်ခံစာမှာ Huawei ၏ တစ်ကမ္ဘာလုံးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သဘောတရားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော သက်သေ အထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Huawei ပြုလုပ်ခဲ့သော CSR ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့် အစီရင်ခံစာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
Huawei ရဲ့ enterprise စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
Huawei ဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အိုင်စီတီနည်းပညာ ပံ့ပိုးသူဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နိုင်ငံပေါင်း ၁၇၀ ကျော်မှာ ထုတ်ကုန်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်။ Huawei ဟာ ကမ္ဘာ့တီထွင်အားကောင်းသော ကုမ္ပဏီ ၅ခုထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုများ ထပ်မံကြည့်ရူရန် >
ဦးတည်မှု၊ ဇွဲလုံလရှိမှု၊ ထိုးဖောက်ကျော်လွှားမှု
ဇွဲလုံ့လရှိမှုသည် ထိုးဖောက်ကျော်လွှားနိုင်စွမ်းသို့ အမြဲတမ်းဦးတည်နေခြင်း မရှိပါ။ ထိုးဖောက်ကျော်လွှားမှုများစွာတို့တွင် မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲတတ်သည့်ပါရမီအမြုတေတစ်ခုရှိတတ်ပြီး အစီအစဉ်အတိုင်းဖွင့်ဟဖော်ပြမှုမလုပ်ပေ။ ဤအကြောင်းရင်းကြောင့် Huawei သည်၎င်း၏နည်းဗျူဟာ၊ ရည်မှန်းချက်များကိုဆုပ်ကိုင်လျှက် ပွင့်လင်းမှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို လက်ကိုင်ထားပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နယ်ပယ်ပေါင်းများစွာထံမှ အရည်အချင်းရှိသူ အမြောက်အများကို ခေါ်ယူခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသည် နယ်ပယ်ပေါင်းများစွာ၌ ထိုးဖောက်ကျော်လွှားရသည့် အခိုက်အတန့်များစွာကို ပြုလုပ်ရာတွင် ပိုမိုထောက်ကူပြုနိုင်သည့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အကျိုးရှိသည့် စိတ်ကူးထက်သန်မှုရှိသော ကွဲပြားခြားနားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးပါသည်။
စိတ်နှစ်မြုပ်မှု၊ ဇွဲလုံ့လရှိမှုနှင့် Huawei ဝန်ထမ်းများရှိ ကိုယ်တိုင်-ပြန်လည်ထင်ဟပ်နိုင်သည့်စိတ်ဓါတ်တို့မှာ မိမိတို့အောင်မြင်ရခြင်း၏ အမြုတေဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ နည်းဗျူဟာမြောက်သည့် ထိုးဖောက်ကျော်လွှားမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အပြောင်းအလဲအတွက် အကူအညီများဖြစ်ပါသည်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကြိုးမဲ့အင်တာနက်စနစ်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်	သောဘဝ
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကြိုးမဲ့အင်တာနက်စနစ်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝ
အောင်မြင်မှု အခိုက်အတန့်လေးအတွက် တစ်ဘဝလုံး နစ်မြှုပ်ထားမှု
သူမ၏အောင်မြင်မှုကို ဆင်နွှဲနေသော Florence Griffith Joyner (“Flo-Jo”)
©Huawei Technologies Co., Ltd.